COVID-19: Amaanka Goobaha Shaqadda iyo ku Noqoshadda Shaqooyinka | LawHelp Minnesota
COVID-19: Amaanka Goobaha Shaqadda iyo ku Noqoshadda Shaqooyinka
Ganacsiyaddee ayaa shaqaalaha shaqada ku soo celin kara?
Laga bilaabo Juun, 10, 2020, ganacsiyada intooda badani waa la furi karaa, hadii ay u hogaansamaan hab-raacyada iyo qorshaha COVID-19.Waxa aad ka heli karaa liis faah-faahinaya gancsiyada la furi karo iyo kuwa aan la furi karin shabakadan: https://mn.gov/deed/newscenter/covid/safework/non-critical/.
Ganacsiyada furani waxaa dhici karta inay leeyihiin xad ah inta qof ee ee gudaha geli karta.
Ka waran haddii guriga anigoo jooga aan shaqeyn karo?
Hadii adigoo gurigaaga jooga aad shaqeyn karo laakiin shaqadaadu aysan kuu ogolayn inaad taa sameyso, wac ama emayl u dir, Hay’ada Xaquuqda Aadanaha ee Minnesota Khadkeeda Ku Xad-gudubka Xaquuqda Guri Ka Soo Shaqeynta: (Minnesota Department of Human Rights Work from Home Violation Helpline):
Wac 651-539-1132 ama khadka kale ee lacag la’aanta ah ee 833-454-0152
Waa maxay talaabooyinka dhanka amaanka sugida ah ee ay shaqadayddu qaadi karto?
Ganacsigii furan ama doonaya inuu furmo waa khasab inuu lahaado qorshe ku saabsan arrimahan soo socda:
Inuu u ogolaado in shaqaalaha guriga iyagoo jooga shaqeyn karaa inay saa sameeyaan
Uu lahaado qaab uu ku hubin karo in shaqaalaha jirani ay gurigooda joogaan. Taa waxaa ku jirta baaritaano caafimaad in la sameeyo.
Qorshe shaqaalaha laftooda lagu kala dheeraynayo iyo mid iyo shaqaalaha iyo macaamiishana lagu kala dheeraynayo iyana
Nidaam nadaafada ah. Kuwaa oo ah sida nidaamka fara-xalashada, nadiifinta iyo buufinta oogooyinka goobaha shaqada, iyo nidaamyo kale si loo joojiyo ama loo yareeyo faafida jeermiska
La baro shaqaalaha oo dhan nidaamka amaanka iyagoo afaf kale ah hadii loo baahdo
Ka waran haddii la iga rabo inaan la shaqeeyo macaamiisha?
Isla nidaamyada kor ku xusan ayaa quseeya, laakiin ganacsigu waa khasab inuu hubiyo in:
Dhamaan dhan walba Shaqaalaha iyo macaamiishu ay 6 hiis isu jiraan
Mugga dukaanka ama ganacsigu uusan ka badan 50% mugiisa caadiga ah. Tani waa 50% tirada dadka ah ee waaxda dab-damisku ay tiri goobta ganacsigu waa qaadi kartaa (tani badanaa waxa ay ku qoran tahay calaamad goobta ganacsiga ku dhagan)
Nidaamyada kala dheeraynta dadka iyo nadaafada ee macaamiisha waa in lagu dhajiyaa kadinka goobta ganacsiga oo ah meel ay macaamiishu ka arki karaan.
Waa inaad xirataa waji-duub hadii aad ka shaqeyso saalooto, meelaha jir xardhida, timo-jarid, ama makhaayad.
Siddee ku ogaadaa in shaqadaydu ay qorshe degsan leedahay?
Ganacsiyaddu waa khasab inay siiyaan qorshahooda oo qoran dhamaan shaqalaalahooda oo dhan. Sidoo kale waa inay ku dhajiyaan meel shaqada dhexdeeda ah oo aad ka arki kartid. Hadii aysan jirin meel lagu dhajin karo, waxa ay noqon kartaa meel kumbutuutar ah hadii adiga iyo shaqaalaha kale aad heli kartaan koobi, waana aad akhrin kartaan marka aad rabtaan.
Ganacsiyada sida kuwa nadiifinta guryaha, dayartirka biyaanada, ama adeegyada hagaajinta alaabta waxaa la yiraa “adeegyada guriga.” Sidoo kale waxa ay u baahan yihiin inay lahaadaan qorshe si ay u ilaaliyaan amaanka shaqaalaha iyo macaamiishaba.
Ciddee ayaa laga rabaa inay xirato af-iyo-sanduub (mask)?
Gobolka Minnesota iyo hay’ada CDC waxa si weyn ugu dhiiri galiyaan dadku inay xirtaan af-iyo-sanduub kolka ay joogan goob walba oo dibada ah oo aysan dadka kale aad ugu dheeraan karin. Shaqaalaha ganacsiyada qaarkood waa khasab inay xirtaan waji-duub, sida kuwa ka shaqeeya saalootooyinka, goobaha jir xardhida iyo makhaayadaha. Ganacsiyaddu waxa ay sameysan karaan nidaamyo iyaga u gaar ah oo ku saabsan xirashada af-iyo-sanduubka (mask), eeg qaybtan hoose ee soo socota.
Magaalooyinka qaarkood waxa ay leeyihiin xeerar oranaya waa khasab dadku inay xirtaan waji-duub. Labada magaalo ee Minnespolis iyo St. Paul waxa ay faraan dadku inay xidhaan waji-duub kolka ay ku jiraan ganacsi gudahii.
Ka waran haddii shaqadaydu aysan lahayn qorshe aysan u hogaansamayn nidaamyada?
Mulkiilaha, maamulaha, ama kormeeraha ganacsigu, baxar ayey geli karaan haddii aysan u hogaansamin nidaamyadaa. Mar hore waa inaad waydiiso shaqadaadda inay u hogaansanto nidaamyada. Haddii taasi shaqeyn waydo ama aad ka baqayso inay shaqada kaa eryaan ama ay si kale uun kaaga aargoostaan, waa aad soo sheegi kartaa. U soo sheeg waxa aad ka walwalsan tahay ee shaqada ka jira hay’ada Minnesota OSHA ee 651-284-5050 ama 877-470-6742. Waxaad kale oo aad geli kartaa khadka (online) ee osha.compliance@state.mn.us. Shaqadaadu kuma ganaaxi karto adiga hadii aad soo sheegto goob shaqo oo aan amaan ahayn.
Hadii Shaqadii Ku Soo Noqo Lagu Yiri Aadanse U Malaynayn Inay Amaan Tahay Shaqo Ku Noqodku
Shaqada ma ka tagi karaa ama fasax ma ka qaadan karaa walina ma heli karaa manfaca shaqaalaha shaqo la’aanta noqda la siiyo?
Maya ilaa inta aad ka raacayso talaabooyinka hoose.
Ka waran haddii aysan amaan ahayn inaan shaqadda ku noqdo sababtoo ah aniga ama qof kale oo qoyskayga ka tirsan ayaa waxa uu ku jiraa dadka khatarta u ah cudurka?
Hadii dhaqtarkaaga ama cid bixisa daryeel caafimaad ay tiraa waa inaad guriga joogtaa sababtoo ah adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan ayaa waxa aad ku jirtaan dadka khatarta u ah cudurka, waydiiso shaqadaaddu inay kuu fidiyo maciin macquul ah.
Maciinka macquulka ahi waa wixii kuu ogolaanaya inaad shaqadaadda qabsato iyadoo lagu siinayo xoogaa caawimaad ah oo dheeraad ah ama bedelaad. Tusaale ahaan, waxa aad waydiisan kartaa shaqadaadda inaad guriga adigoo jooga shaqeyso, aad soo gadato qalab aad xirato oo ku ilaaliya, aad bedesho saacadaha shaqadda, ama ay kuu ogolaadaan inaad ka shaqeyso meel dad yari joogaan.
Waa inaad qoraal ahaan ku codsataa maciinada macquulka ah.
Hubi inaad kala harto koobiyo warqadaadda aan ku codsanayso maciinka.
Hadii shaqadaaddu ay ku siiso maciin macquul ah, waa khasab inaad ku noqoto.
Ka eeg warqadayada Xaqaa’iqa, ee akhbaar dheeraad ah COVID-19: Reasonable Accommodations at Work
Ka waran hadii shaqadaydu aysan I siin maciin macquul ah?
Ka hel warqad dhaqtarkaaga sharxaysa sababta adiga ama qof qoyskaaga ka tirsani aad khatarta ugu jiraan cudurka iyo nooca mciinada aad u baahan tahay. Ka dib u gee shaqadaadda.
Waa muhiim inaad kala harto koobiyo wixii dukumiitiyo ah ee aad u geyso shaqada. Kuwaa waxaa ku jira warqada dhaqtarka iyo wixii xaashiyo ah ee aad ka hesho shaqadaadda ee cadeynaya inaad shaqo diyaar u ahayd hadii amaanku fiicnaa. Sidoo kale, qor wixii aad ku wada hadashaan adiga iyo shaqadu mar kasta oo aad wada hadashaan. Ku dar magaca qofka aad la hadashay, maalinta iyo waqtiga aad wada hadasheen. Hadii aysan ku siin maciin macquul ah, wac xafiiska Legal Aid.
Waxaad kaloo codsan kartaa fasax in lagu siiyo. Qoraal ahaan u samee. Hadii shaqadaadu aysan ANSIXIN fasaxa, waxaad u baahan tahay inaad go’aansato inaad shaqada ku noqoto ama inaad isaga tagto. Hubi inaad kala harto koobiyo warqadaha iyo xaashiyaha kaleba. Hadii fasax laguu ogolaado ama aad go’aansato inaad shaqadda ka tagto, wali waxaa dhici karta in lagu siiyo manfcyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo. Soo wac Legal Aid. Haddii laguu diido.
Anigu ama qof qoyskayga ka tirsani si gaar ah khatar uguma nihin cudurka. Ma iska kay socon karaan manfacyadu shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo halkii aan shaqada ku noqon lahaa?
Maya. Aan ka ahayn hadii shaqadaaddu aysan u hogaansamayn xeerarka amaanka. Hadii ay taasi jirto, waxaad u sheeggi kartaa shaqadaadda waxa aad ka walwalsan tahay si aad u siiso fursad si ay u saxaan wixii dhib ah ka hor inta aadan shaqada isaga tagin si kolkaa aad guriga u joogto aadna u sii qaadato manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo.
U soo sheeg waxa aad ka walwalsan tahay ee shaqadda ku saabsan Hay’ada Minnesota OSHA ee khadkeedu yahay ama isticmaal shabakada osha.compliance@state.mn.us. Shaqadaadu kuma ganaaxi karto kaamana aar-goosan karto soo sheegida goob shaqo oo aan amaan ahayn.
Xeerarka ku saabsan amaanka, ka eeg shabakada (website) MN OSHA ee http://www.dli.mn.gov/business/workplace-safety-and-health/mnosha-compliance-novel-coronavirus-covid-19.